WiFi လိုငျးကို နှောငျ့နှေးစတေဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျး (၈) မြိုး
HomeKnowledgeWiFi လိုငျးကို နှောငျ့နှေးစတေဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျး (၈) မြိုး
1. သတ်တုမကျြနှာပွငျနှငျ့ သတ်တုနှငျ့ ပွုလုပျထားသော ပစ်စညျးမြား
သတ်ထုတှကေ လြှပျကူးပစ်စညျးဖွဈပွီး လြှပျစဈဓာတျကို စုပျယူပါတယျ။ WiFi က လြှပျစဈသံလိုကျ လှိုငျးကို ထုတျလှတျတဲ့ အတှကျ သတ်ထုမကျြနှာပွငျ ဒါမှမဟုတျ သတ်ထုပစ်စညျးနဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ ပရိဘောဂပစ်စညျးတှကေ လြှပျစဈသံလိုကျလှိုငျးတှကေို ဟနျ့တားနမှောပါ။ အဲဒါကွောငျ့ WiFi စကျကို သတ်ထုပစ်စညျးတှနေဲ့ ဝေးရာမှာ ထားသငျ့ ပါတယျ။
2. အုတျနံရံ၊ ကြောကျနံရံ
4. ရခေဲသတ်ေတာနှငျ့ အဝတျလြှျောစကျ
5. ခရဈစမတျ မီးသီး
8. Microwave မီးဖို
WiFi လိုငျးကောငျးဖို့ ဆိုရငျ
1. WiFi စကျကို အထကျက ဖျောပွခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ ဝေးမယျ့ တဈနရောမှာ ပွောငျးထားပါ။
2. စကျကို အမွဲ update လုပျပါ။
3. အရညျအသှေး ကောငျးတဲ့ antenna ကိုပဲ အသုံးပွုပါ။
4. မှနျးဆရ ခကျတဲ့၊ ခကျခဲတဲ့ password ကို လုပျထားပါ။
5. WiFi amplifier လို့ ချေါတဲ့ WiFi extender ကို သုံးပါ။
6. WiFi နဲ့ ပတျသကျလို့ နောကျဆုံးပျေါ နညျးပညာတှကေို သုံးပါ။
7.5GHz ထုတျလှတျတဲ့ WiFiက 2.4 GHz ထုတျလှတျတဲ့ WiFi ထကျ အငျတာနကျလိုငျး ပိုမွနျပါတယျ။
8. WiFi ကို Reset ခပြါ ။
အဲဒါဆိုရငျတော့ အငျတာနကျလိုငျးက အရငျကထကျ ပိုကောငျးလာ မှာပါ။
WiFi လိုင်းကို နှောင့်နှေးစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်း (၈) မျိုး
1. သတ္တုမျက်နှာပြင်နှင့် သတ္တုနှင့် ပြုလုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ
သတ္ထုတွေက လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို စုပ်ယူပါတယ်။ WiFi က လျှပ်စစ်သံလိုက် လှိုင်းကို ထုတ်လွှတ်တဲ့ အတွက် သတ္ထုမျက်နှာပြင် ဒါမှမဟုတ် သတ္ထုပစ္စည်းနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေက လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေကို ဟန့်တားနေမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် WiFi စက်ကို သတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝေးရာမှာ ထားသင့် ပါတယ်။
2. အုတ်နံရံ၊ ကျောက်နံရံ
မှန်က ပုံရိပ်တွေကို ထင်ဟပ်စေသလို WiFi ရဲ့ လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေ ကိုလည်း ပြန်လည် ထင်ဟပ်စေပါတယ်။ မှန်က WiFi အတွက် ဒိုင်းလိုဖြစ်နေပြီး အင်တာနက်လိုင်းကို ပြန်လှည့် သွားစေပါတယ်။ မှန်နားမှာ WiFi စက်ကို ထားရင် အင်တာနက်လိုင်း မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေမှာပါ။
4. ရေခဲသေတ္တာနှင့် အဝတ်လျှော်စက်
5. ခရစ်စမတ် မီးသီး
ကွန်ပြူတမော်နီတာက 2.4 GHz ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး WiFi ကလည်း 2.4 GHz ကို ထုတ်လွှတ် ပါတယ်။ စက်နှစ်လုံးက တူညီတဲ့ လှိုင်းတွေကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှတ်တဲ့ အခါ data တွေ ပို့ဖို့အတွက် လျှပ်စစ်လှိုင်း အစား လေလှိုင်းကိုပဲ သုံးပါတယ်။ ကွန်ပြူတာက အင်တာနက်လိုင်းကို လိုအပ်ပေမယ့် WiFI ကို ကွန်ပြူတာနဲ့ အရမ်းနီးအောင် မထားသင့် ပါဘူး။
1. WiFi စက်ကို အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝေးမယ့် တစ်နေရာမှာ ပြောင်းထားပါ။
2. စက်ကို အမြဲ update လုပ်ပါ။
3. အရည်အသွေး ကောင်းတဲ့ antenna ကိုပဲ အသုံးပြုပါ။
4. မှန်းဆရ ခက်တဲ့၊ ခက်ခဲတဲ့ password ကို လုပ်ထားပါ။
5. WiFi amplifier လို့ ခေါ်တဲ့ WiFi extender ကို သုံးပါ။
6. WiFi နဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေကို သုံးပါ။
7.5GHz ထုတ်လွှတ်တဲ့ WiFiက 2.4 GHz ထုတ်လွှတ်တဲ့ WiFi ထက် အင်တာနက်လိုင်း ပိုမြန်ပါတယ်။
8. WiFi ကို Reset ချပါ ။
အဲဒါဆိုရင်တော့ အင်တာနက်လိုင်းက အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာ မှာပါ။